UCharles Dickens. Amabali eKrisimesi amaninzi ngaphandle kukaMnu Scrooge | Uncwadi lwangoku
UCharles Dickens. Amabali eKrisimesi angakumbi ngaphandle kukaMnu Scrooge
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Amabali
UDickens wabhala amabali amahlanu eKrisimesi.
Nguye zakudala zakudala, eyona yaziwa kakhulu. Elona bali lifundwayo nelibonwayo, ibali, ibali kunye nefilimu yale mihla. Ingaba u Ibali leKrisimesi (1843) nguCharles Dickens. Imisebenzi yalo mbhali odumileyo wamaNgesi ayifi, kodwa oku kusenokwenzeka ukuba yeyona yaziwayo neyaziwayo.
Wayengowokuqala ukubhala ngeKrisimesi kwaye aba balandelayo bagutyungelwa kukuthandwa kwenkosi yakhe I-Scrooge. ndikhetha aba bathathu kwabahlanu: IiChimes, Bathakathiwe y Ikhilikithi yasekhaya. Ukuba ubungabazi, jonga. Ayizizo iinkunzi ...
Ayinakubakho kule mihla kwaye ayinakuze isilele. Siyikhumbule okokoko sinako ukukhumbula. Lelona bali lidumileyo leKrisimesi. Siyibonile kwiinguqulelo eziliwaka kunye nokulungelelaniswa kwemidwebo kunye neefilimu. Kwaye siyayibona kwakhona kuba, ngokulula, ayidinwa. Ibali lika-Ebenezer Scrooge obawayo nongathandekiyo, iqabane lakhe uJacob Marley, umqeshwa wakhe uBob Cratchit kunye nonyana wabo omncinci uTim, kunye neziporho zangaphambili, ezangoku nezexesha elizayo zihlala zikhazimla.
Kodwa, njengoko besitshilo, uDickens wabhala amanye amabali isethwe ngeli xesha lonyaka. Zonke zigcina ezona zinto ziphambili ezigcweleyo emsebenzini waseDickensian. Ke sinomnxeba we intelekelelo, umzobo kunye nokugxekwa kwezentlalo, ukuhlekisa okuhlekisayo, ukonwaba ekhaya kunye nekamva, ophatha ngamnye ngokweendlela zakhe. Makhe sijonge ezi zinto zintathu.
2 Iqakamba kwiziko
3 Indoda ekhohlakeleyo
4 Kutheni uzifunda
Kuthunyelwe kuyo 1844, ikwabizwa ngokuba yi Iintsimbi. Kwaye ibali lakhe lifana ncam Ibali leKrisimesi.
Ukutsha, Isiteketiso sikaToby Veck, yindoda lihlwempu nendoda endala owenza ukuphila njengomthunywa, ohambisa iipakethe naphina eLondon. Hayi ukholo olulahlekileyo Ebuntwini, kubo bonke ububi kunye nosizi olubonayo ngeenxa zonke. Kunyaka omtsha Uya kuba namava aqhelekileyo kwimeko yentsimbi yecawa apho uhlala uchitha ixesha ulinde ukuhanjiswa. Pha Utyelelwe ngoomoya abaza kumnceda ukuba abuye nalo olo kholo kwaye bazokumbonisa ukuba akukho mntu uzalwa enobubi, kodwa ulwaphulo-mthetho nentlupheko zizinto ezenziwa ngumntu.
De 1845. Yi ibali elimnandi apho iqakamba liguqulwa libe ziifiriyi ezilandelelanayo. Ibali lenzeka kwiintsuku ezintathu kwaye lahlulwe laba ziingoma ezintathu. Iqakamba, uphawu loxolo kumakhaya athobekileyo, sisiseko sebali. Kwingoma yokuqala, iqakamba liyavuya. Kweyesibini, uyathula kwaye okwesithathu, uyacula kwakhona. Phantse ngumbongo weprozi ngobomi basekhaya kunye nothando losapho, isishwankathelo sempilo yabantu abaqhelekileyo.
Kuthunyelwe kuyo 1848. Ikwabizwa ngokuba Ukuthakathi kunye nokujongana nesiporho, Indoda ekhohlakeleyo y Abanini, yinoveli emfutshane. Kukhumbuza ezininzi Ibali leKrisimesi.
UNjingalwazi Redlaw unesizungu, uhlazekile, kwaye akanathemba ngubani othanda ukukhalaza ngomonakalo abamenza kuye kunye nembandezelo athe wayifumana. Ngobunye ubusuku umoya ofana kakhulu naye ubonakala kuye kwaye ucebisa ukuba ayilibale loo ntlungu, umonakalo kunye neengxaki. Utitshala uyathandabuza ekuqaleni, kodwa ke uyavuma. Ke kuphelelwa ziinkumbulo kokubi kakhulu kwithuba lakhe elidlulileyo, kodwa iba krakra ngakumbi kwaye unomsindo ungazi nokuba ungayichaza njani. Ubukrakra buqhubeka buye kwisicaka sakhe uSwinggers, usapho lakwaTetterby, kunye nomfundi wabo. Kwaye wonke umntu unomsindo njengaye. Oyena mntu ubonakala ezolile nguMilly, inkosikazi kaSwidgers.
Incwadana iphela yonke into ibuyela esiqhelweni kunye noRedlaw, nanjengoMnu Scrooge, wajika waba yindoda entsha, enobubele, enovelwano ngakumbi.
UDickens uyafana noncwadi olona lubalaseleyo. Kwaye ngeKrisimesi. Ngaba zikho ezinye izizathu ezifunekayo zale mihla kunye nezomntu?
Ke ukusukela apha Ndinqwenela bonke abafundi be-Actualidad Literatura iKrisimesi emyoli. Yiba nexesha elimnandi ngeencwadi ezintle kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Amabali » UCharles Dickens. Amabali eKrisimesi angakumbi ngaphandle kukaMnu Scrooge
Izixhobo zesitayile kuncwadi
Iincwadi ezisi-7 esiza kuzifunda ngo-2017